နိုင်ငံနှင့်လူသားတို့၏အခြေခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်စက်မှုတော်လှန်ရေးမှ စ၍ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာစွမ်းအင်များဖြင့်မောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ဆိုးရွားလှသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုပျက်စီးစေသည်၊ မကြာသေးမီကရေကြီးမှုများ၊ သို့မဟုတ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့များသည်နေထိုင်ရန်မသင့်တော်ကြောင်းရိုးရှင်းသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများကြောင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်။ ၁၉၉၀ တွင်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၇၁% ခန့်သည် ၀ င်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၈၇%အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သန်း ၉၄၀ နီးပါး (၁၃ ရာခိုင်နှုန်း) သည်လျှပ်စစ်မီးမရရှိခဲ့ပေ။
သို့သော်လည်းဤစွမ်းအင်အကျပ်အတည်းကိုဖြေရှင်းရန်သမားရိုးကျစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုသည်အခြားစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုမွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ ယနေ့“ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိသုခချမ်းသာရေးနှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များ၏သာယာဝပြောရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသောအဓိကပြဿနာဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတာဝန်ယူသည် 87% ကမ္ဘာ့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုမှ
ခေတ်မီစွမ်းအင် ၀ န်ဆောင်မှုများလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဆင်းရဲခြင်းဟုရည်ညွှန်းသည်။ စွမ်းအင်ရရှိမှုသည်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားသော ၀ င်ငွေမြင့်နိုင်ငံများ (သို့) ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဟုသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံများသည်ထိုအမျိုးအစားသို့ ၀ င်ရောက်သည့်ပထမ နှစ်မှစ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည်ဟုယူဆရသည်။
ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ရယူသုံးစွဲမှုသည်အနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောစီးပွားရေးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများစွာတွင်ဤလမ်းကြောင်းသည်သိသာထင်ရှားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အိန္ဒိယတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်သည် ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိမြင့်တက်လာသည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင်စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှု (၉၈ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး) နှင့်နီးစပ်သည်။ လူ ဦး ရေတိုးပွားသည့်နိုင်ငံများအတွက် ၀ င်ခွင့်ရရှိသည့်လူ ဦး ရေ၏ထိုကဲ့သို့တိုးတက်မှုများက ပို၍ အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။
နိုင်ငံအများစုအတွက်လမ်းကြောင်းသည်အထက်သို့ရောက်နေသော်လည်းအရေအတွက်သည်ဆိုးရွားစွာနောက်ကျနေဆဲဖြစ်သည်။ ရောင်စဉ်အနိမ့်ဆုံးတွင်ချဒ်လူ ဦး ရေ၏ ၈.၈% သာလျှပ်စစ်မီးရရှိသည်။
အချို့နိုင်ငံများအတွက်စွမ်းအင်ရယူမှုသိသိသာသာတိုးတက်လာခြင်းသည်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအရေးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၆၀% သာသန့်ရှင်းသောလောင်စာဆီများကိုသုံးစွဲနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အိမ်ထောင်စု ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းသာသန့်ရှင်းသောလောင်စာဆီများလက်လှမ်းမီမှုသည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတောင်အာရှနှင့်အရှေ့အာရှတို့တွင်တိုးတက်မှုသည်သိသိသာသာပိုများလာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အိမ်ထောင်စု ၁၈% နှင့် ၁၆% အသီးသီးရရှိခဲ့သည်။ လူတို့သည်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းအတွက်ခေတ်မီစွမ်းအင်ကိုမရရှိနိုင်ကြသောအခါအစိုင်အခဲလောင်စာများ၊ အထူးသဖြင့်သစ်၊ မြေ, ဇာ၊ ကျောက်မီးသွေးနှင့်စက်ရုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
၁၉၈၀ တွင်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည်ချက်ပြုတ်ရန်အခဲလောင်စာများကိုသုံးခဲ့ကြသည်။ နှစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ အချက်အလက်များအရ၎င်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသောပြသနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ချမ်းသာသောဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကတို့တွင်ဝေစုသည်အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများထက်များစွာနိမ့်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ င်ငွေမြင့်နိုင်ငံများတွင်အခဲလောင်စာများအသုံးပြုခြင်းသည်လုံးဝအတိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဒေသအားလုံးတွင်အခဲလောင်စာများသုံးစွဲမှုကျဆင်းနေသည်။ သို့သော်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲအရှေ့တောင်အာရှ၏အောင်မြင်မှုသည်ရှယ်ယာ ၉၅% မှ ၆၁% သို့ကျဆင်းသွားသည်။
ကျန်းမာရေးသုတေသနပြုချက်အရမိုးလေ ၀ င်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် နှစ်စဉ် ၁.၆ သန်းသေဆုံးသည်၊ သန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းကြောင့်သေဆုံးမှု၏နှစ်ဆကျော်
ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) ၏မကြာသေးမီအစီရင်ခံစာများအရထင်းကိုလောင်စာအဖြစ်သုံးခြင်းသည်သစ်တောပျက်စီးခြင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ သစ်သည်အရှေ့၊ အနောက်နှင့်အလယ်အာဖရိကတို့တွင်စွမ်းအင်၏ထက်ဝက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၁၀ မှစ၍ တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အကြီးဆုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ တွင်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၀% ကျော်ရှိသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲများမှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည်လည်းမြင့်တက်လာသော်လည်းရေရှည်စွမ်းအင်ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက်၎င်း၏စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ဝေစုသည်သိသိသာသာတိုးရန်လိုအပ်သည်။
Ivanova and Wood ၏အစီရင်ခံစာကဂျာမနီ၊ အိုင်ယာလန်နှင့်ဂရိကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများထက်ပိုများသည် 60% အိမျထောငျစုမြားတှငျ ၂.၄ တန်အထိရှိသောနှစ်စဉ်လူတစ် ဦး ချင်းထုတ်လွှတ်မှုရှိသည်။
ကမ္ဘာကြီးသည်နှစ်စဉ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ (CO50eq) ဖြင့်တိုင်းတာသောဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တန်ချိန် ၅၀ ဘီလီယံခန့်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။
ထုတ်လွှတ်မှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုလျှော့ချနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုထုတ်လွှတ်မှုတွေကိုလက်ရှိနည်းပညာတွေနဲ့ဖျောက်ပစ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုတွက်ချက်ဖို့၊ ငါတို့ရဲ့ထုတ်လွှတ်မှုကဘယ်ကလဲဆိုတာကိုအရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်။
ထုတ်လွှတ်မှုလေးပုံသုံးပုံခန့်သည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုမှလာသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မြေအသုံးချမှုတို့မှငါးပုံတစ်ပုံနီးပါး (ဤအရာသည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်လက်လီရောင်းချခြင်းအပါအ ၀ င်) ဖြစ်သည်။ ကျန် ၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်စက်မှုနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှဖြစ်သည်။
1. (လျှပ်စစ်၊ အပူနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး): ၇၃.၂%
2. တိုက်ရိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ: ၅.၂%
3. အမှိုက်: 3.2%
4. စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်မြေအသုံးချမှု: ၁၈.၄%
ကမ္ဘာကြီးသည်စွမ်းအင်မရှိဘဲမနေနိုင်၊ ရှေ့ဆက်သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းထက်မကပိုလိုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ရှိနေ ဦး မည်လား။
ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်အောင်မြင်သောလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသောနိုင်ငံများဥပမာများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ဒါဟာတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအဓိကမေးခွန်းက“ ငါတို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လား”၊ ဒါပေမယ့်“ ငါတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လား” ။ ဤသည်မှာကမ္ဘာ့စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များသို့ကူးပြောင်း: အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များအပေါ်ကမ္ဘာ့မှီခိုအားထားမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ စက်မှုခေတ်အများစုကိုရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ အသုံးပြု၍ ဖန်တီးခဲ့သော်လည်းရေအားလျှပ်စစ်၊ ဇီဝလောင်စာ၊ ဘူမိအပူ၊ အပူလှိုင်း၊ ဒီရေ၊ နေရောင်ခြည်နှင့်လေစွမ်းအင်ကဲ့သို့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသုံးသောနာမည်ကြီးနည်းပညာများလည်းရှိသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့ရွှေ့ပါ။ အချို့သောစွမ်းအင်ကဏ္sectorsများသည် decarbonize ရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကာဗွန်နိမ့်နည်းပညာများရရှိနိုင်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသို့ပြောင်းရန်လိုသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်: အစိမ်းရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များမှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်အပူပေးဝေမှုကိုတည်ငြိမ်စေပြီး CO2 ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး decarbonization အတွက်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသိအမှတ်ပြုလာသည်။
စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နည်းပညာသည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်သော်လည်းစွမ်းအင်ထိရောက်မှုတိုးတက်ရေးသည်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနှင့်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
၂။ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ENERTEQ ကဲ့သို့လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုစနစ်ကိုသုံးခြင်းဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးစွမ်းအင်ပိုမိုချွေတာရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်မှုကဏ္inတွင်ခေတ်မီ flue ဓါတ်ငွေ့ကုသမှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း Flue gas treatment သည်စက်မှုဇုန်တစ်ခုတွင်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများလောင်ကျွမ်းခြင်းမှထုတ်လုပ်သောညစ်ညမ်းမှုပမာဏကိုလျှော့ချရန်ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကုသမှုနှင့်အတူဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်ခေတ်မီနည်းပညာများစွာရှိသည်။
1. ကာဗွန်ဖမ်းယူမှုနှင့်မြေအောက်သိုလှောင်မှုကာဗွန်ဖမ်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း (CCS) သည်သံမဏိနှင့်ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့စက်မှုလုပ်ငန်းများမှကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖမ်းယူသည့်နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကာဗွန်ကိုသင်္ဘောသို့မဟုတ်ပိုက်လိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုဘူမိဗေဒပုံစံများဖြင့်နက်ရှိုင်းစွာမြှုပ်နှံသည်။
2. မီသိန်းဓာတ်ဖမ်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် မီသိန်းဖမ်းယူခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်လေထုထဲသို့မ ၀ င်မီမီသိန်းဓာတ်မြေသြဇာများကိုဖမ်းယူသည့်နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မီသိန်းသည်လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်အပူကိုထုတ်လုပ်ရန်လောင်ကျွမ်းသည်။
လျှော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ပစ္စည်းအသစ်များပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးမ ၀ င်သောကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်၊ ခဲ၊ ဇင့်နှင့်သံကဲ့သို့ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ်များမှထုတ်ယူခြင်း (သို့) တူးဖော်ခြင်းမှလာမည့်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ ငါတို့အဲဒါတွေကိုပြန်သုံးတဲ့အခါပစ္စည်းတွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူဖို့၊ သယ်ယူဖို့၊ ထုတ်ယူဖို့စွမ်းအင်နည်းနည်းကြာတယ်။ ထို့ကြောင့် 3R ၏ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်အလွန်အရေးပါသည်။